Xoghayaha arrimaha dibadda Britain iyo Madaxweynaha kenya oo arrimaha Soomaaliya ka hadlay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xoghayaha arrimaha dibadda Britain iyo Madaxweynaha kenya oo arrimaha Soomaaliya ka hadlay
4th June 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Xoghayaha arrimaha dibadda Britain Phillip Hammond iyo Madaxweynaha Kenya oo kulan ku wada qaatay magaalada Nairobi ayaa ka wada hadlay ammaanka iyo xaaladda dalka Soomaaliya.
Labada Mas’uul ayaa isla soo hadal qaaday halista Kooxaha argagixisada ay ku hayaan ammaanka Kenya, iyo sida ay muhiim u tahay in labada dal ay iska kaashadaan ladagaalankooda.
Madaxweyne Uhuru Kenyata ayaa sheegay in Kenya aysan nabad noqon karin, iyada oo aan lagu guuleysan xasiloonida Soomaaliya,
“Waxaan ku baaqay in sare loo qaado taageerada caalamiga ah ee wax looga qabanayo nabadda geeska Afrika oo aan daganeen muddo ka badan 20 sano” ayuu yiri Mr Kenyatta.
Madaxweynaha Kenya, ayaa sheegay in loo baahan yahay taageero badan oo xagga maaliyada ah si loo burburiyo Al Shabaab loona xoojiyo ciidamada Dowladda Soomaaliya ka hor inta aysan AMISOM ka bixin Soomaaliya.
Xoghayaha arrimaha dibadda ayaa booqasho aan horay loo sii shaacin ku yimid Magaalada Muqdisho toddobaadkii u dambeeyay, isaga oo la kulmay Madaxweynaha Jamhuuriyadda federalka oo ay ka wada hadleen xaaladda Soomaaliya.
Dagaal Culus oo ka dhacay Degaan hoostaga Degmada Balcad
Banaanbaxyo lagu taageerayo Heshiiskii Beelaha Baladweyne oo ka dhacay Magaaladaasi